प्रथम भिमसेन थापा कपको उपाधि वडा नं ४ लाई | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
प्रथम भिमसेन थापा कपको उपाधि वडा नं ४ लाई
Published On : १६ आश्विन २०७६, बिहीबार १९:३४
प्रथम भिमसेन थापा सेभेन ए साईड फुटवल कप २०७६ को उपाधि वडा नं ४ ले जितेको छ ।
तान्द्राङको कुलिगैरा खेल मैदानमा भएको प्रतियोगितामा भिमसेन थापा गाउँपालिका वडा नं ४ ले वडा नं १ लाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो ।
वडा नं ४ लाई कुनैपनि गोल फर्काउन नसक्दा वडा नं १ ले उपविजेतामा नै चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ ।
प्रतियोगितामा वडा नं ६ लाई ३–२ गोल अन्तरले पराजित गर्दै वडा नं ७ तेस्रो हुन सफल भएको आयोजक वडा खेलकुद समितिका कोषाध्यक्ष उमेश खनालले जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशः नगद ५० हजार, ३० हजार र २० हजारका साथमा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार पाएका छन् । उनिहरुलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वर पाण्डेले पुरस्कार प्रदान गरे ।
प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी वडा नं १ का प्रताप गुरुङ, सर्वाधिक गोलकर्ता वडा नं ४ का सन्तलाल गुरुङ, उत्कृष्ट रक्षक वडा नं ३ का प्रभाकर बञ्जरा भएका छन् । वडा नं ३ का विरोचन विक उदाउँदो खेलाडी हुन सफल भएका छन् । उनीहरुलाई जनही पाचँ हजार रुपैयाँका साथमा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
भिमसेन थापा गाउँपालिका वडा नं ३ को वडा खेलकुद समितिको आयोजनामा असोज १३ देखि १५ गतेसम्म भएको प्रतियोगितामा गाउँपालिका भित्रका सातवटा वडाको सहभागिता थियो ।